Dr. Ko Ko Gyi to Mya Aye (ဒေါက်တာ ကိုကိုကြီးမှ ဝေလေလေ မြအေးသို့) … | Danya Wadi
»သတင်းများ»Dr. Ko Ko Gyi to Mya Aye (ဒေါက်တာ ကိုကိုကြီးမှ ဝေလေလေ မြအေးသို့) …
Dr. Ko Ko Gyi to Mya Aye (ဒေါက်တာ ကိုကိုကြီးမှ ဝေလေလေ မြအေးသို့) …
Posted by danyawadi on August 20, 2012 in သတင်းများ, ဆောင်းပါးများ
ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကိုကိုကြီး နှင့် ကိုမြအေး သဘောထား ရှင်းလင်းချက်
But yesterday, when my friends from Singapore came to ou
r house for Eid celebration and told me politely that they got some unconfirmed news that during your trip to Mandalay, you had allegedly told the Muslims there that you are alsoaMandalayan.
← Indonesia to help rebuild homes for Rohingyas in Burma
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ဒေါ်စုနှင့် NLD နှုတ်ပိတ်နေခြင်း အပေါ် ဒေါက်တာ မောင်ဇာနည် ဝေဖန် … →